Ku dhawaad 12,000 arday oo imtixaanka guud u fariistay gudaha Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandKu dhawaad 12,000 arday oo imtixaanka guud u fariistay gudaha Puntland
May 20, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ku dhawaad 12,000 arday oo imtixaanka guud u fariistay gudaha Puntland. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 12,000 arday ayaa maanta oo Sabti ah gudaha Puntland u fariisatay imtixaankooda ugu dambeeya ee fasalka 8-aad iyo fasalka 12-aad, sida ay sheegeen saraaakiisha Wasaaradda Waxbarashada ee Puntland.
Isaga oo ka hadlayay munaasabada furitaanka imtixaanka, Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camay ayaa u rajeeyay ardayda mustaqbal wanaagsan oo ifaya.
Imtixaanka ayaa socon doona lix beri, kaasoo ka dhici doona 86 goobood oo kuyaala sagaalka gobol ee Puntland, sida ay sheegeen saraaakiisha Wasaaradda Waxbarashada.
Puntland ayaa lagu tixgeliyaa meesha ugu waxbrashada wanaagsan gudaha Soomaaliya.